Hay’adaha gargaarka oo sheegay in Kenya ay ku xad-gudubtay sharciga caalamiga ah ee qaxootiga. | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Hay’adaha gargaarka oo sheegay in Kenya ay ku xad-gudubtay sharciga caalamiga ah...
Hay’adaha gargaarka oo sheegay in Kenya ay ku xad-gudubtay sharciga caalamiga ah ee qaxootiga.
Hay’ad daryeelka qoxootiga ee laga leeyahay dalka Norway ee Norwegian Refugee Council (NRC), ayaa sheegtay in khasabka ay dowladda Kenya ugu celinayo Somalida ku nool xerada qoxootiga ee ugu wayn Caalamka ay tahay arrin xad-gudub ku ah shuruucda caalamiga ah ee Qoxootiga.
Dowladda Kenya ayaa bartamihii Sannadkaan 2016-ka Amar ku bixiyay in la xiro xeryaha Qoxootiga Dhadhaab ee Dalkeeda ku yaalla kuwaas oo ay ku nool yihiin oo Tiro ka badan 280,000 oo Qoxooti Soomaaliyeed ah ay ku nool yihiin.
Xoghayaha Guud ee hay’ada NRC, Jan Egaland ayaa ku baaqay in muddada kama dabeysta ah ee dadkan loo qabtay laga noqdo maadaama ay keenayso dib u noqosho Hab-qan Fawdo ah.
“Sida ka muuqata xaaladda aan ku soo aragnay meeshaan, arrintu ma ahan mid Ikhtiyaarka Qoxootiga ku xiran oo ay ku niyadsan yihiin, isla markaana ay ku badbaadayaan,” ayuu sheegay Jan Egaland.
Hay’adda NRC ayaa sheegtay in qoxootiga ku noqonaya Soomaaliya aanay helin ilaalo ku Filan. Bishii August ee Sannadkaan ayaa 74% Soomaalida Qoxootiga ah ee Dhadhaab ku nool waxay sheegeen inaysan doonayn inay Somalia dib ugu laabtaan, iyadoo sababta ugu weyn ku sheegay nabad-gelyo darrada ka jirta Soomaaliya.
Hay’adaha udooda xuquuqda aadanaha sida Human Rights watch iyo kuwa gar gaar ka ee QM ayaa horay u cambaareeyay go’aanka Kenya ay sheegtay inay ku xirayso xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee ku yaala gobalka Soomaalidu ay degto ee wogooyi bari ee dalka Kenya.
2011 dowlaha kenya iyo Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi ku gaaray heshiis dhigayay in qaxootiga aan si qasab ah dib loogu soo cilin doonin.
Previous articleRuushka oo is hor-taagay nabadaynta Suuriya.
Next articleInternational communities issued joint statement on upper house candidates.